Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka ayaa ku dhiirran inay qarxaan foolkaane
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka ayaa ku dhiirran inay qarxaan foolkaane
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
"Ma sameyn karno saadaalin waqti-gaaban ah, laakiin wax walba waxay muujinayaan inay u xuubsiiban doonto dhulgariirro waaweyn oo noqon doona kuwo aad u daran oo ay dadku dareemi doonaan," ayuu yiri agaasimaha IGN ee Jasiiradaha Canary, María José Blanco.
Dhulgariirka oo cabbirkiisu yahay 4,222 gariir ayaa laga helay meel u dhow foolkaanaha Tenegula ee jasiiradda La Palma.
Saraakiisha Jasiiradaha Canary waxay soo saareen digniin huruud ah-kii labaad ee nidaam afar heer ah.
Machadka National Geographic ee dalka Spain ayaa ka digay in maalmaha soo socda la filayo dhulgariir xooggan
Mas'uuliyiinta dowladda gobolka Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka ayaa soo saaray digniin ku saabsan suurtagalnimada qarxinta foolkaane, ka dib markii Machadka National Geographic ee Spain (IGN) uu ogaaday 'dhulgariir xoog leh' oo ah 4,222 gariir oo u dhow foolkaanada Teneguía ee jasiiradda La Palma.
Folkaanaha Teneguía ee jasiiradda La Palma.
The Canary Islands mas'uuliyiintu waxay soo saareen digniin huruud ah Talaadadii-tii labaad ee nidaam afar heer ah, iyagoo ka digay dhulgariir dhici kara.
Maanta, qiimaynta waa la cusboonaysiiyay si loo sheego in, in kasta oo mas'uuliyiintu aysan rumaysnayn inuu qarxo degdeg ah, xaaladdu si dhakhso ah ayay isu beddeli kartaa.
IGN ayaa sidoo kale ka digay in “dhulgariirro aad u daran” la filayo “maalmaha soo socda.”
"Ma samayn karno saadaalin waqti-gaaban ah, laakiin wax walba waxay tilmaamayaan inay u xuubsiiban doonto dhulgariirro waaweyn oo noqon doona kuwo aad u daran oo ay dadku dareemi doonaan," agaasimaha IGN Jasiiradaha Canary, María José Blanco, ayaa tiri.
Laga bilaabo Khamiista, 11 milyan oo mitir kuyuubik (388 milyan oo cubic feet) oo magma ah ayaa “lagu muday” gudaha Beerta Qaranka ee Cumbre Vieja oo u dhow foolkaanada Teneguía, sida laga soo xigtay Machadka Fulkaanaha ee Canary Islands, taasoo keentay in dhulku kor u kaco 6cm (2in) marka ugu sarreysa.
Fulkaanadii ugu dambaysay waxay qarxday sannadkii 1971 -kii, taasoo sababtay burbur hantiyeed iyo xeebta u dhow, waxaana ku dhintay hal kalluumaysato ah, in kasta oo meelaha dadku ku badan yihiin iyo goobaha dalxiiska ee ku xeeran aanay saamayn. Qaraxii hore ka dib, dhaqdhaqaaqii dhulgariirku wuu qaboojiyay, wuxuuna dib u bilaabmay 2017, iyadoo maalmihii u dambeeyay ay arkeen gariirku.
Qaybaha kale ee Canary Islands sidoo kale waxay hoy u yihiin Folkaano firfircoon, oo ay ku jiraan Teerida Tenerife, oo aan qarxin tan iyo 1909, iyo Lanzarote's Timanfaya, oo ugu dambeysay qarxay qarnigii 19aad.